Joel Matip oo dhaawac ku seegaya garoommada inta ka dhimman xilli ciyaareedka – Gool FM
(Liverpool) 30 Juun 2020. Sida wararku ay sheegayaan Joel Matip ayaa dhaawac ku seegi doona garoomada inta ka dhimman xilli ciyaareedkan, kaddib markii uu ku dhaawacmay kulankii ay la ciyareen Everton.
Daafaca kooxda Liverpool ee Joel Matip ayaa seegi doona ugu yaraan todobo kulan oo horyaalka Premier League ah xilli ciyaareedkan kaddib markii uu dhaawac cagta ah soo gaaray intii lagu guda jiray kulankii ay la dheeleen Everton.
Waxa uu ku dhaawacmay kulankii 0-0 ku dhammaaday ee ka dhacay garoonka Goodison Park, intaas kaddibna waxa uu kooxdiisa ka maqnaa ciyaartii ay 4-0 guusha uga qaateen Crystal Palace ka hor intii aysan Chelsea guusha ka gaarin Manchester City, isla markaana la xaqiijin in Reds ay ku guuleysatay horyaalka Ingiriiska markii ugu horreysay muddo 30 sano ah kaddib.
Matip ayaa ka qeyb qaadan doonin tababarrada ay sameynayso Kooxda uu hoggaamiyo Tababare Jurgen Klopp, maxaa yeelay waxa uu sii wadi doonaa soo kabashadiisa dhaawac.
Waxa uu u sheegay Website-ka rasmiga ah: “Xilli ciyaareedkaan kuma soo laaban doono garoommada, laakiin xilli ciyaareedka soo socda waxaan rajeynayaa inaan goor hore si toos ah u caawiyo kooxda.”
Liverpool ayaa ugu dambeyntii ku guuleysatay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League kaddib markii Chelsea ay 2-1 ku garaacday kooxda uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola.
Klopp iyo Kooxdiisa Liverpool ayaa haatan isku diyaarinaya kulanka ay Etihad ku wajahayaan Manchester City habeenka ay Jimco soo galayso ee soo aaddan.
Maqnaanshaha Matip ayaa la micno ah in Virgil van Dijk, Dejan Lovren iyo Joe Gomez ay yihiin daafacyada dhexe ee taamka u ah haatan kooxda Tababare Klopp.